နှိပ်စက်နှင့်တူးစင်စက် VTC စီးရီးစက်ရုံ - တရုတ်နှိပ်စက်နှင့်တူးစင်စက် VTC စီးရီးထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ
500 * 400 * 300mm Brother Drill Tap စင်တာတွင်အလိုအလျောက်ချောဆီအရည်ကြည်စနစ်ပါဝင်သည်
အမည်: VTC500H Travle: 500 * 400 * 300mm အမြန်နှုန်း: 15000/20000 / 24000rpm ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ: 2.2 / 3.7kw အသားတင်အလေးချိန်: 2800kgs ATC အမျိုးအစား: 16 Tools များ Clamp Arm ATC အမြန်နှုန်းမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် cnc တူးစင်နှင့်တိပ်စက်စင်တာ VTC500Product features: 1 ။ လေယာဉ်ကိုယ်ထည်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောသံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်းကြွက်သားများနှင့်အရိုးများကိုအားဖြည့်ပေးပြီး၎င်းတို့အားလုံးကို tempering.3 ဖြင့်ကုသသည်။ နှင့်ကနျ့ဒြပ်စင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအထူးဒီဇိုင်း software.4 အားဖြင့်ထုတ်ယူသည်။ ဒီဟာက ...
20000 RPM ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း CNC တူးစက်နှင့်နှိပ်စက် 600 * 400 * 300mm ခရီးသွား Universal
အမည်: VTC600H ခရီးသွားခြင်း - ၆၀၀ * ၄၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာအမြန်နှုန်း - 20000Rpm ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ - ၂.၂ / ၃.၇kw အသားတင်အလေးချိန် - ၂၈၀၀ ကီလိုဂရမ်ဇယားအရွယ်အစား - ၇၀၀ * ၄၀၀ မီလီမီတာအမြန်ဆုံးအစာ - ၄၈ * ၄၈ * ၄၈ မိနစ် / မိနစ်စားပွဲတင်အမြင့်ဆုံး - ၂၅၀၀ ကီလိုဂရမ် - ၂၀၀၀၀RPM ဗိုင်းလိပ်တံ မြန်နှုန်းမြင့် CNC တူးစက်နှင့်နှိပ်စက်သွားလာမှု ၆၀၀ * ၄၀၀ * ၃၀၀mm ဤအမြန်နှုန်း ၃ ရိုးတံ ၃ စင်တီမီတာဘုံစင်မှအချက်များတွင် ၁ ။ အုတ်မြစ်၊ ကော်လံ၊ အဓိကဗိုင်းလိပ်တံသေတ္တာ၊ လျှောကျသောစားပွဲ၊ စားပွဲနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုစွမ်းအားမြင့်သတ္တုများထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ၂ ။
အမြန်နှုန်းရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးညီအစ်ကိုတူးဖော်ရေးစင်တာ ၂၅၀ ကီလိုဂရမ်အများဆုံးစားပွဲတင်ဝန်
နာမည်: VTC500H ခရီးသွားခြင်း - ၅၀၀ * ၄၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာအမြန်နှုန်း - 20000Rpm ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ - ၂.၂ / ၃.၇kw အသားတင်အလေးချိန် - ၂၈၀၀ ကီလိုဂရမ်ဇယားအရွယ်အစား - ၆၀၀ * ၄၀၀ မီလီမီတာအမြန်နှုန်း - ၄၈ * ၄၈ * ၄၈ မီတာ / မိနစ်အမြင့်စားပွဲ - ၂၅၀၀ ကီလိုဂရမ် - ၂၀၀၀၀RPM ဗိုင်းလိပ်တံ မြန်နှုန်းမြင့် CNC တူးဖော်ခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ခရီးသွားခြင်း ၅၀၀ * ၄၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာအသွင်အပြင်များ - ဆက်သွယ်ရေး၊ အီလက်ထရောနစ်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်မော်တော်ကားစက်ရုံများစသည့်ခေတ်မီဆန်းပြားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်သုတ်သင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု။ 1. သုံးလိုင်းလမ်းညွှန်နှင့်အတူရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းပုံ ...
မြင့်မားသောတင်းကျပ်စွာဖုံးအုပ်ထားသည့် Auto Tapping Machine 10 KVA စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်စွမ်းအား
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် CNC တူးစင်နှင့်နှိပ်စက်၊ ၁၂၀၀၀rpm CNC နှိပ်ချက်စင်တာ
နာမည်: CNC စက်နှင့်တိပ်ခြင်းစက် Center VTC500 ဇယား - ၆၀၀ * ၄၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ခရီးသွားခြင်း - ၅၀၀ * ၄၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံအလှည့်အရှိန် - ၁၂၀၀၀rpm၊ ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT30 ATC အမျိုးအစား: ၁၆ Tools Clamp Arm ATC X / Y / Z Rapid Feed : ၄၈ မီတာ / မိနစ်အမြင့်ဆုံး ၀ န်ဆောင်မှု ၂၅၀ ကီလိုဂရမ်မြန်သောအမြန်နှုန်းမြင့်သော cnc တူးစက်နှင့်တိပ်စက် VTC500 ကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ်များ - ၁။ X / Y / Z ဝင်ရိုးသည် linear gudie နည်းလမ်းများ၊ ၃ ရိုးရိုးစံအမြန်နှုန်းသည် ၄၈ မီတာ / မိနစ်ဖြစ်သည်။ / မိနစ်) 2. မြင့်မားသောတင်းကျပ်စက်ကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း။ dril အပြင် ...
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Linear Gudie နည်းလမ်းများဝင်ရိုးတန်း CNC Drill Tap Centre 48m / Min လျင်မြန်သောအစာ
အမည်: VTC700 X / Y / Z အမြန်နှုန်း - ၄၈ မီတာ / မိနစ်အမြင့်ဆုံးဖြတ်တောက်မှု - ၁၂ မိနစ် / မိနစ်တည်နေရာတိကျမှု - ၀.၅၅ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - ၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အမြင့်တင်: ၁၆ ကိရိယာများ Clamp Arm ATC အမြန်နှုန်းမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမြင့် cnc စက်စင်တာ VTC500 စက်ကိရိယာ။ : ၁ ။ vtc700 တွင်းတူးစက်တွင်ဂျပန်၏သွင်းကုန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် (Mitsubishi or Fonarco)2ကိုအသုံးပြုသည်။ သုံးဝင်ရိုး linkage.3 နားလည်သဘောပေါက်ရန်၎င်း၏ထောက်ပံ့ servo ယာဉ်မောင်းနှင့်မော်တာ။ အလိုအလျောက်ကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းကိရိယာဖြင့်၊
သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်း CNC တူးစက်နှင့်နှိပ်စက်၊ ၃.၇kw Spindle Motor Cnc Lathe စက်
အမည်: VTC600 မက်စ်ဖြတ်ဖြတ်မှု - ၁၂ မိနစ် / မိနစ်ဗိုင်းလိပ်တံ Tapper: BT30 Min ။ Set Moving Unit: ၂.၂ / ၃.၇kw အရွယ်အရွယ်အစား - ၁၈၅၀ * ၂၃၁၅ * ၂၃၇၅ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - ၃.၇kw အမြန်နှုန်းမြင့်သောအမြန်နှုန်းမြင့် cnc စက်စင်တာ VTC500 ထုတ်ကုန်၏အင်္ဂါရပ်များ - ၁။ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ အမြန်နှုန်းနှင့်မြင့်မားသောဘောလုံး linear slide rail နှင့် ၂ တိကျမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုသေချာစေရန် Ball screw ကိုအသုံးပြုထားသည်။ ၃။ စက်၏ ၀ င်ရိုးသုံးခုသည်ရထားလမ်း၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်သည်။
တိကျသော CNC တွင်းတူးစက်နှင့်သတ္တုထုတ်စက် CNC Turning Machine
X / Y / Z ခရီးသွားခြင်း - ၆၀၀ * ၄၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: ၃.၇kw ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: 15000/20000 / 24000rpm ATC အမျိုးအစား: ၁၆ ကိရိယာ Clamp Arm ATC X / Y / Z မြန်သောအမြန်နှုန်း - ၄၈ မီတာ / မိနစ်အမြင့်ဆုံး: 250kg အမြင့် အမြန်နှုန်းမြင့်ထိရောက်သော cnc တူးဖော်ခြင်းနှင့် taping machine center VTC500 ကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ်များ - ၁။ ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ကော်လံ၊ အဓိကဗိုင်းလိပ်တံသေတ္တာ၊ လျှောလျှောကျ။ စားပွဲခုံ၊ 2. အတွင်းစိတ် metallographic ဖွဲ့စည်းပုံအလွန်တည်ငြိမ်သည်။ 3. သတ္တုများပုံသွန်းအစိတ်အပိုင်းများပြသ ...
အမြန်နှုန်းအလိုအလျှောက် CNC တူးစက်နှင့်နှိပ်စက် 800 * 400mm စားပွဲတင်အရွယ်အစား
နာမည်: VTC700H ဇယားအရွယ်အစား - ၈၀၀ * ၄၀၀ မီလီမီတာဇယားခရီးသွားခြင်း - ၇၀၀ * ၄၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးနှင့်ဗိုင်းကြား - ၁၅၅ - ၄၅၅ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ - ၃.၇kw အမြင့်ဆုံးအရှည် - ၂၀၀ မီလီမီတာအမြန်နှုန်းမြင့်သောအမြန်နှုန်းမြင့် cnc စက်နှင့်တိပ်စက် VTC500 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာ - ၁ ။ vtc700H တွင်းတူးစက်၏စက်ကိရိယာသည်ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်စနစ်ထိန်းချုပ်မှု (Mitsubishi or Fonarco)2ကိုအသုံးပြုသည်။ သုံးဝင်ရိုး linkage.3 နားလည်သဘောပေါက်ရန်၎င်း၏ထောက်ပံ့ servo ယာဉ်မောင်းနှင့်မော်တာ။ တူးနှင့် processing.4 အတွက်အသုံးပြုအော်တို tool ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ကိရိယာကိုသုံးပါ။ ...
VTC-1000 20000RPM3Axis Automatic Drill And Tapping Machine 1100 * 500mm Table Table
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၁၁၀၀ * ၅၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း: ၁၀၀၀ * ၅၀၀ * ၃၃၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: 20000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT30 ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ: ၃.၇kw မက်စ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစာ: ၁၂ မီတာ / မိနစ်အရွယ်အစား: ၂၅၃၀ * ၁၉၃၀ * ၂၂၅၀ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - 3500kg VTC-1000 20000RPM3Axis Automatic Drill and Tap Machine 1100 * 500mm Table Table X / Y / Z ပုဆိန်များသည်လမ်းညွှန်လမ်းဖြစ်သည်။ စံသတ်မှတ်ထားသောလျင်မြန်သောအစာမြန်နှုန်း ၃ ပုဆိန်သည် 12m / min ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသော - တင်းကျပ်သောစက်ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ။ ထို့အပြင်နိမ့်ကျသောကြိတ်ခွဲနိုင်စွမ်းရှိသည့်တွင်းတူးခြင်းအပြင် ...
VTC-500 အမြန်နှုန်း ၃ အလွှာသေးငယ်သည့်ဒေါင်လိုက်သတ္တု CNC တူးစက်နှင့်နှိပ်စက်
အခြေအနေ - အသစ်သော Volytage - သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်ဇယားအရွယ်အစား - ၆၀၀ * ၄၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ခရီးသည် - ၅၀၀ * ၄၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးနှင့် ၀ င်ရိုးအကြား - ၄၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံအလှည့်အမြန်နှုန်း - 12000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT30 Spindle Motor: 3.7kw ATC အမျိုးအစား: Clamp Arm ATC ၁၆ ခုပါသောမက်စ်ဖြတ်ဖြတ်မှု - ၁၂ မိနစ် / မိနစ်တည်နေရာတိကျမှု - 0.005mm အရွယ်အစား - ၁၈၅၀ * ၂၃၀၀ * ၂၃၀၀ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - ၂၈၀၀ ကီလိုဂရမ်အမြင့်တင်ဇယား - ၂၅၀၀ ကီလိုဂရမ် Hole တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများ CNC တူးစက်နှင့်နှိပ်စက်အလယ်ဗဟို VT500 ၁ ။ ပုံစံ ၁) X / Y / Za...
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် Clamp Arm CNC တွင်းတူးခြင်းနှင့်နှိပ်စက်
အမည်: CNC တူးစက်နှင့်တိပ်ခြင်းစက်ထုတ်လုပ်ခြင်း - ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာအစိတ်အပိုင်းများဇယား - ၆၀၀ * ၄၀၀ မီလီမီတာ ATC အမျိုးအစား - ကိရိယာတန်ဆာပလာ ၁၆ ခုပါသော Clamp Arm ATC လှည့်လည်နှုန်း - ၁၂၀၀၀rpm အသားတင်အလေးချိန် - ၂၈၀၀ ကီလိုဂရမ်အရွယ်အစား - ၁၆၁ * ၂၃၁၅ * ၂၃၇၅ မီလီမီတာ X / Y / Z ခရီးသွားလာခြင်း - ၅၀၀ * 400 * 300mm CNC တူးစက်နှင့်တိပ်ခွေ VTC500 ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာအစိတ်အပိုင်းများကို Clamp Arm နှင့်အတူပြုပြင်ခြင်းကိရိယာများ။ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်များ ၁။ ဗိုင်းလိပ်တံ၏အလှည့်အပြောင်းသည် rpm ၁၂၀၀၀ ထက်မနည်းဖြစ်ပြီး၊ ၀ င်ရိုး ၃ ခုလျှင်မြန်သောရွေ့လျားနှုန်းသည် ၄၈ မီတာထက်မနည်းပါ။ မိနစ်